トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ City kadhi wokurarama chikwereti | akadai chimbadzo basa kukarukureta, basa mashoko
Kana ukashandisa Citi Cards ndiye, mukati yezvinoreva "kunotenga ribonucleic iripo puranga", unogona kusarudza wokurarama zvikwereti. Available puranga riri pakutsvaga pavaipfuura aongororwa kuitwa panguva kadhi zvibvumirano, mune zvimwe zviitiko panewo nyaya umo shoma mari kupfuura zvinowanika puranga riri kadhi iri. Kana mukati anowanika puranga, zvinokwanisika kuti usarudze wokurarama zvikwereti kuchitoro.
Mukuwedzera, kadhi guta Kune mhando mbiri basa "zvose wokurarama kubva ribonucleic-gare gare". "Chinhu ribonucleic" kureva, kunyange kana musingadi zvakananga kumunetsa wokurarama zvikwereti muchitoro, ane basa, dzakadai muripo unoitwa wokurarama chikwereti. Kana iwe tsanangurai bundu Nemutengo kana Yakabudiswa, kuitira kuti muve nechokwadi inofanira aiti sezvo wokurarama zvikwereti, panguva kushandiswa ngatiitei kungwarira.
"wokurarama Papera" kureva, kunyange kana iwe tsanangurai bundu Nemutengo kana Yakabudiswa, ane basa kuti anogona kuchinja mari nzira kuti wokurarama chikwereti gare gare. basa iri, kubudikidza rokugovera nzira parunhare kana paIndaneti, unogona kushandisa.
bhuku | ribonucleic The paya | For mutsividzo nzira
mutsividzo kuti wokurarama mbiri zvakanakira nekuipira
City kadhi, rave huviri "twasu-mutsetse kosi Flex shanduka Course". Mugore twasu-mutsetse Chokwadi, unogona kuona chemhosva chitsama pamwedzi iri kuwanda 10,000 Yen kusvika 50,000 Yen (10,000 Yen). Zvisinei, kana kutenga ribonucleic iripo puranga hunopfuura 500,000 Yen, zvichave zviri kuwanda 20,000 Yen kusvika 50,000 Yen. In
flex shanduka Chokwadi, chemhosva kuwanda remwedzi iri pakutsvaga zvinowanika pakuenzanisa wava. Zvisinei, kana kupfuura kunotenga kuwanikwa puranga, sezvo zvakafanira kubhadhara zvakawandisa panguva kamwe chinotevera mwedzi, ngatiitei kungwarira.
wokurarama chikwereti rairo City kadhi wokurarama chikwereti chimbadzo basa makadhi
City achizosiyana zvichienderana mhando uye nguva kushandisa kadhi. Zvakananga, Guta zvazvingava Real wepagore muna Zvikomborero kadhi City Cash shure kadhi City Elite kadhi "kubvira 13.2 kusvika 18,0 muzana (kubvuma munguva musimboti 15,0 muzana zvinoshanda)", "15,0 muzana" muGuta kadhi yakajeka, uye mune mamwe kadhi "kubvira 12,0 kusvika 18,0 muzana." zvichava.
chimbadzo kubhadhara, asi zvichaitwa dzaona ne "kushandisa mari × zvazvingava wegore chaivo", yakasiyana chimbadzo yechikoro kuuya akarembera parutivi chemhosva nguva. Somuenzaniso, panyaya City Clear kadhi, panyaya chemhosva nguva iri gore rimwe, asi iwe une pangozi iri 15,0% of interest rairo pamwero pagore, mune nyaya mutsividzo mumwedzi mitanhatu vachava 7.5 muzana hafu. Nemamwe mashoko, mupfupi chemhosva nguva, chimbadzo kubhadhara kubhadharwa kuva duku.